Saraakiisha Aqalka Cad ayaa sheegaya hadda in Ruushka uu halis yahay | Baydhabo Online
Aqalka Cad ayaa soo saaray war ah in dowladda Ruushka ay weli halis ku tahay doorashooyinka mustaqbalka ee Maraykanka, wuxuuna hadalkan soo baxayaa xili hubanti la’aan ay ka jirto hadalo uu horay u yiri madaxweyne Trump oo diiday in Ruushka ay inaba farogalin ku sameeyeen doorashooyinkii Maraykanka ee uu isaga kusoo baxay.
Trump ayaa u muuqday nin dafiraya warbixintii ay soo saareen hay’adda sirdoonka Maraykanka ee sheegay in Ruushka uu farogalin ku sameeyay doorashooyinkii dhacay, kuwa mustaqbalkana uu halis ku yahay.
Balse gabadha ah afhayeenka Aqalka Cad Sarah Sanders ayaa tiri “Madaxweynaha waxa uu ka shaqaynayaa sidii Ruushka aysan ugu suurtogali lahayn in ay farogaliyaan doorashooyinka Maraykanka sidii ay horey u sameeyeenba”.
Saacado ka hor, wariyaha ABC News Cecilia Vega ayaa Trump weeydiisay in Ruushka ay weli bartilmaameedsanayaan doorashooyinka Maraykanka ee soo socda iyo kale, wuxuuna ku jawaabay “Mahadsanid in badan, Maya. Uma malaynayo in taas ay dhacayso”.
Trump ayaa sheegay in uu Putin kala hadlay arrimaha farogalinta Ruushka ee doorashooyinka, balse waxa uu dhaleeceeyay dadka isaga neceb ee wax ka sheegay kulankii uu Putin la yeeshay, Isaga oo ku sheegay in uu hayo xanuun uu ugu magacdaray “Xanuunka Trump nacayb ah”.